Markii ay dalka wax ka dhacaan maxay Qurba-joogtu uga qaylo badan tahay Qorrax-joogta?!! | Hadalsame Media
Home Maqaallada Markii ay dalka wax ka dhacaan maxay Qurba-joogtu uga qaylo badan tahay...
Markii ay dalka wax ka dhacaan maxay Qurba-joogtu uga qaylo badan tahay Qorrax-joogta?!!
(Muqdisho) 31 Maarso 2019 – Horta aan kala xishoono akhyaareey ileyn intii isku dan ahiba xaq bey u leedahay iney danteeda ka hadashee.
Haddii Muqdisho xaalad degdeg ah la galsho ama meel walba dhagxaan lagu jaro waa sax oo xaq bey u leeyihiin dadka Muqdisho ku dhex nool iney ka hadlaan kana cowdaan dhibka heysta oo waa innaga intaas ka hadleyna oo meel walba la taagan.
Iminkase Anigoo ka afeefanaya oo ay jiraan Qurbajoog badan oo wanaaga ka shaqeysa hadana waxaa ii muuqata in dadka ugu badan ee ka hadlaya ey yihiin qaar Qurbaha jooga iyo kuwa gobollada kale ee dalka ku sugan oo weliba sawiro iyo LIVE Maxaa ka cusub Muqdisho?
Dagaal baa goor dhow qarxi raba & erayo kale sticmaalaya, naguna noqday culeys kale iyo dhagxaan fowdo ah oo dusha nooga soo daadaneysa.
Xarfaaneey idinka wado idinkama xirna, Qarax idinkama ag dhacayo, hadeey u badato waxaad oran kartaan Ehelkiii iyo reerihii baa Muqdisho naga jooga iyaduna waa gar, laakiin u daaya ehelka iyo qaraabada qudhooda xaaladda ku dhexjira iyagaa dantooda ka hadlayee pls.
Hadii Masuulkii ka hadla Amniga Caasimadda aad been ka wada faafisaan oo tiraahdaan wuxuu yiri xaalad degdeg ah oo uusan oran.
Marka Qarax dhacana dadka ugu hor sheega ay yihiin Qurbo joogta dadka Madaxda ku nacalada dhibka dhacaya waa isla idinka, Aloore dhibaatada dalka inaad qeyb ka tihiin awalba waan ogaa lkn tani waa Siyaado ee ma Alshabaab dibadda joogaa jira oo afka ku dagaalamaya waa la murgaye?
War Magaalooyinka aad ku nooshihiin Annagu idiinkagama warano xogtoodana waan idiinma gacan dhaafnee midda aan ku noolnahay ha nooga waramina billaacaleyk, xaafad waxey xaafad kale ugu gudubtaa waa Xasarad sow maaha?
FG: Maqaalkani wuxuu ka tarjumayaa aragtida qoraha ku saxiixan oo qura
Previous articleSiyaasi kashifay cidda & ujeedada ”ka dambaysa” burburinta anteenooyinka shirkadda HORMUUD
Next articleQisada BISADDANI waxay muujinaysaa waxa ka khaldan & qallafsanaanta mujtamaceenna, carruur & cirroole (Fadlan akhri)